फिल्टरहरू आयात गर्नुहोस बाह्य XML फाइलहरू लोड गर्नुहोस र खुल्ला कागजात XML फाइल ढाँचा भित्र फाइलहरूको ढाँचा रूपान्तरण गर्नुहोस. तपाईँंले एउटा फिल्टर आयात गरे पछि, फाइल खुल्ला संवादमा फाइल प्रकारहरूको सूची थप गरिएको फिल्टरको नाम
फिल्टरहरू आयात गर्नुहोस खुल्ला कागजात XML फाइलहरू रूपान्तरण गर्नुहोस बचत XML ढाँचामा एउटा फाइलहरू. तपाईँंले एउटा आयात फिल्टर स्थापना गरे पछि, Export dialogमा फाइल प्रकारहरूको सूचीमा फिल्टरको नाम थप गरिएको छ.
फिल्टरहरू आयात गर्नुहोस/निर्यात गर्नुहोस एउटा भिन्न XML फाइलहरू भित्र खुल्ला कागजात XML फाइलहरू लोड गर्नुहोस र बचत गर्नुहोस format. तपाईँंले ति फिल्टरहरू स्थापना गरेपछि, फाइल खुल्ला कागजात र संवादको रूपमा फाइल बचत गर्नुहोस.मा फाइल प्रकारहरूको सूचीमा फिल्टरको नामहरू थप गरिएको छ.
Extensible Markup Language (XML) मा वर्ल्ड वाईड वेब संकाय पृष्ठहरू